YOYARLAY - Canon ၏ ရေစိုခံကင်မရာသစ် ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်
Forgot your password? Forgot your username? Create an account? Register
ပင်မစာမျက်နှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအထက်မြန်မာပြည်သတင်းအောက်မြန်မာပြည်သတင်းပညာရေးဘာသာရေးမှုခင်းစီးပွားရေးမြန်မာ့စီးပွားရေးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဈေးကွက်နိုင်ငံတကာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဥရောပအမေရိကအာရှအာဖရိကဖျော်ဖြေရေးအနုပညာအင်တာဗျူးရုပ်ရှင်သီချင်းဖက်ရှင်ဗေဒင်အားကစားဘောလုံးတင်းနစ်(စ်)ဂေါက်(စ်)အခြားအားကစားများသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်ကျန်းမာရေးဆေးဝါးမိတ်ဆက်ရောဂါကုထုံးအလှအပရေးရာဆောင်းပါးFitness & Dietစာအုပ်စင်ကဗျာဝတ္ထုတိုဆောင်းပါးကလေးများကမ္ဘာကာတွန်းဥာဏ်စမ်းသိမှတ်စရာအဖြာဖြာဆေးရောင်လှလှခြယ်ရအောင်Photo News
You are here: ပင်မစာမျက်နှာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ အီလက်ထရောနစ် Canon ၏ ရေစိုခံကင်မရာသစ် ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်
Canon ၏ ရေစိုခံကင်မရာသစ် ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက် 17 July 2012 |
By Mobile Guide နာမည်ကျော် အီလက်ထရော နစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သော Canon ကုမ္ပဏီမှ အသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ် လိုက်သော မော်ဒယ်လ် သစ်ကင်မရာ တစ်မျိုးကို Canon Products များအား မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသည့် Golden Rock ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
၄င်းမော်ဒယ် သစ် ကင်မရာမှာ Power Shot D 20 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အ ပျော်တမ်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူများ၊ သတင်း ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်တမ်းဓါတ် ပုံရိုက်ကူး လိုသူများအတွက် သင့်တော်သော ကင်မရာသစ်အမျိုး အစားဖြစ်ကာ ဒီဇိုင်းပုံစံဆန်းပြီး 12.1 Mega Pixel ပုံရိပ် အရည် အသွေးနှင့်5x optical zoom အသုံးပြု ပါဝင်သည်။
အခြားအဆင့်မြင့် အရည်အသွေးများဖြစ်သောရေ အောက် 10 မီတာအထိရိုက် ကူးနိုင် ခြင်း၊ 100c Cold Tolerance, IPX-Class dust Proof, GPS နှင့် အခြားFunction များစွာပါဝင်ပြီးDisplay မှာ3.0" LCD မျက်နှာ ပြင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဈေးနှုန်းမှာUSD 510 ဝန်းကျင် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး Canon Products များရောင်းချသော Canon Show room များနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဆိုင် များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
back to top ကြော်ငြာများ
Copyright © 2013 YOYARLAY. All Rights Reserved.